इतिहासकै शक्तिशाली बने प्रधानमन्त्री ओली ! २०८ सांसदको ओलीलाई समर्थन, को-को प्रतिपक्षमा ? | DON Nepal इतिहासकै शक्तिशाली बने प्रधानमन्त्री ओली ! २०८ सांसदको ओलीलाई समर्थन, को-को प्रतिपक्षमा ? – DON Nepal
Home डन समाचार इतिहासकै शक्तिशाली बने प्रधानमन्त्री ओली ! २०८ सांसदको ओलीलाई समर्थन, को-को प्रतिपक्षमा ?
इतिहासकै शक्तिशाली बने प्रधानमन्त्री ओली ! २०८ सांसदको ओलीलाई समर्थन, को-को प्रतिपक्षमा ?
By Don NepalMar 11, 2018, 18:07 pmComments Off on इतिहासकै शक्तिशाली बने प्रधानमन्त्री ओली ! २०८ सांसदको ओलीलाई समर्थन, को-को प्रतिपक्षमा ?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको तीन चौथाइ बढी मत प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै एक महिनापछि ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका हुन् ।
२०१५ सालमा बिपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारपछि ५९ वर्षमा पहिलोपटक मुलुकले बलियो सरकार पाएको छ । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहमतीय आधारमा प्रतिपक्षबिनाको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, चुनावी प्रतिस्पर्धापछिको पहिलो बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका ओलीले पाएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मंसिर ३ मा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । संसदमा मत विभाजन प्रक्रियाबाट गरिएको मतदानमा ओलीले ७५.६३ प्रतिशत मत पाएका हुन । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ओलीका पक्षमा २ सय ८ मत परेको थियो भने विपक्षमा जम्मा ६० मत परेको थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा र्बैठकमा गरेका थिए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले मात्रै ओलीको विपक्षमा मत हालेको थियो । नेमकिपाका प्रेम सुवाल भने तटस्थ बसे । वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीलाई मधेस केन्द्रित राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम पनि समर्थन गरेका थिए ।
एमालेका १ सय २१, माओवादी केन्द्रका ५२ (एक जना सभामुखले मतदान नगरेको), राजपा १६ (रेशम चौधरी सपथ बाँकी), संघीय समाजवादी फोरम १६, एक सिटे राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय जनमोर्चा दुर्गा पौडेल र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर मल्लले ओलीका पक्षमा मतदान गरेका थिए । ६३ जना सांसद रहेको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसकै ४ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए । नयाँ शक्तिका डा.बाबुराम भट्टराई पनि विदेशमा रहेकाले मतदानमा अनुपस्थित रहे ।
Previous Postत्यहि दिन ‘बोक्सी’ को आरोपमा शिक्षिका पनि कुटिइन्, को थिए ती ‘देवता’ जसले राधालाई बचाउन सफल भए ? Next Postप्रधानमन्त्री ओलीले आज विश्वासको मत लिँदै, राजपाको पनि समर्थन